November 26, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Musharaxa ugu cad cad ee ku guuleysan kara abaal-marinta Ballon d’Or 2019 oo la shaaciyay
Cayaaraha November 26, 2019
(Paris) 26 Nof 2019. Wargeysyada gudaha dalka Spain ayaa waxay shaaca ka qaadeen musharaxa ugu cad cad ee ku guuleysan kara abaal-marinta Ballon d’Or 2019, taasoo ay sanad kasta bixiso majalada “France Football” ee dalka Faransiiska. Sida laga soo xigtay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain Xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ​​ayaa ah xiddiga ugu […]Sii akhriso
Lionel Messi oo isku diyaarinaya dhacdo taariikhi ah kulanka Barcelona ee soo socda
(Barcelona) 26 Nof 2019. Xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa isku diyaarinaya dhacdo taariikhi ah kulanka ay habeen dambe la ciyaari doonaan naadiga reer Germany ee Borussia Dortmund. Barcelona ayaa habeen dambe ku soo dhaweyn doonto kooxda Borussia Dortmund garoonka Camp Nou, si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan kulamada 5-aad wareega group-yada […]Sii akhriso
Somali News November 26, 2019
Mogadishu(SONNA)- the Mayor of Mogadishu and Banadir Governor H.E. Omar Mohamud Mohamed (Filish) had visited areas affected by the rains in the capital and has instructed the Municipality and emergency departments to stand up for the humanitarian crisis caused by the rains,SONNA reported. The governor and other members of banadir regional administration toured the Sii akhriso
Shirkii gudiga fulinta ee XDS oo soo gaba gaboobey.
DDS November 26, 2019
Shirkii gudiga fulinta, XDS ee lagaga doodayay barnaamijyada siyaasadeed iyo xeer-hoosaadka xisbiga Barwaaqada ee PP, ayaa soo gabogaboobay. Eng, Maxamad Shaale Isaaq, madaxa xarunta dhexe ee XDS, ayaa ugawaramay, wakaalada warbaahinta deegaanka soomaalida, go’ankii ka soo baxay shirka.Waxaa uu mudane, Shaale sheegay in dhamaan qodobadii ay dhawaan soo jeediyeen XDS, si Sii akhriso
Dhulgariir ka dhacay Albania oo geystay khasaaroyin kala duwan
Soomaaliya November 26, 2019
Dhulgariir cabirkiisu yahay 6.4 ayaa ku dhuftay woqooyiga magaalada Tirana ee caasimadda dalka Albania,kaas oo geystay lix dhimasho ah iyo dhaawacyo gaarayua 325 ruux. Dhulgariirkaan oo ka bilowday magaalada Durres, ayaa lagu waramay in uu saameyn ku yeeshay dhul baaxaddiisu tahay 13—meyl,kaas oo ku dhow caasimadda Tiraana. Dhlgariiirkaan oo ah kii ugu weynaa ee mudo […]Sii akhriso
DEG DEG: UEFA oo ku dhawaaqday 50 ciyaaryahan ee u sharraxan Kooxda Sanadka… (Yaa kaga jira Kooxdaada?)
(Yurub) 26 Nof 2019. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay 50 xiddig ee u sharraxan ama laga soo xuli doono Kooxda sanadka 2019. Liiska 50-kaan ciyaaryahan ayaa waxa ay kala yihiin; shan goolhaye, 15 Daafac, 15 Khadka dhexe ah iyo 15 Weeraryahan. Natiijada ugu dambeysa ee kooxda sanadka Yurub ee UEFA […]Sii akhriso
Kooxda Manchester United oo ku dhow inay heshiis rikoor dhanka xayeysiinta maaliyaddeeda ah la gasho Shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha
(Manchester) 26 Nof 2019. Sida uu ku waramayo Wargeyska The Sun Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qarka u saaran inay heshiis rikoor oo dhanka xayeysiinta funaanadeeda ah la gasho Shirkad laga leeyahay Waddanka Shiinaha. Sida warbixinta lagu sheegay Shirkaddan oo la yirahaado Haier group ayay kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford kula heshiis rabtaa 70 milyan Sii akhriso
Mogadishu(SONNA)-On the first day of the 16 Days of Activism for No Violence against Women and Children, participants at a public awareness forum in Mogadishu called for an end to violence against women in conflict, gender-based sexual violence and conflict-related sexual violence. Organized by the African Union Mission in Somalia (AMISOM), the forum brought together […]Sii akhriso
RASMI: Raheem Sterling oo ka mid noqday musharraxiinta Abaal-marinta shaqsiyadda isboortiga BBC ee sanadka 2019
(Yurub) 26 Nof 2019. Ciyaaryahanka Kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa ka mid noqday musharraxiinta abaal-marinta shaqsiyadda isboortiga BBC ee sanadka 2019 (BBC Sport Personality of the Year 2019). Waxaa lagu dhawaaqay lixda shaqsi ee u sharraxan abaal-marinta shaqsiyadda isboortiga BBC ee 2019 waxaana ka soo muuqday Weeraryahanka Man City ee Raheem Sterling, Sii akhriso
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio ayaa kulan soo dhaweyn ah u sameysay Safiirka Dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Ali Sharif Ahmed iyo safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abukar Osman. Kulankaasi dhexmaray dhinacyadaasi ayaa ujeedkiisu ahaa sidii la isugu xiri lahaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo Safaaradd Sii akhriso